निदायो काठमाडौँ महानगर : घरघरबाट फोहर फाल्न थालेपछि वाग्मती बन्यो डम्पिङ साइट Nepalpatra निदायो काठमाडौँ महानगर : घरघरबाट फोहर फाल्न थालेपछि वाग्मती बन्यो डम्पिङ साइट
निदायो काठमाडौँ महानगर : घरघरबाट फोहर फाल्न थालेपछि वाग्मती बन्यो डम्पिङ साइट
काठमाडौँ । डेढ महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहर उठ्न नसक्दा घरघरबाट वाग्मती नदीमा फोहरको थुप्रो फाल्न थालेको भेटिएको छ । यसरी घरघरबाट गैरजिम्मेवार नागरिकले फोहरको डंगुर फाल्न थालेपछि पवित्र वाग्मती नदी डम्पिङ साइट बनेको छ ।
यसरी काठमाडौँ महानगरपालिका दिउसै निदाए जस्तो गरेर बसेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर नउठ्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । यसरी नागरिकको स्वास्थ्यमाथि कुन खेलबाड गर्दैछ महानगर ?
बञ्चरेडाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको पहिलो ‘सेल’ निर्माणको काम सक्न अझै केहि समय लाग्ने हुँदा फोहर व्यवस्थापनमा थप ढिला भएको हो । यो बारेमा पहिल्यै सोच्नुपर्ने होइन र ?
केवल महानगरपालिका र सरकारलाई दोष मात्र दिएर हुँदैन । नागरिक आफै संचेत र जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ । आखिर किन महानगरवासीले पनि पवित्र नदी बाग्मतीमा फोहर फाल्ने गर्छन । नागरिक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्दैन । ५ करोडको आफ्नो घर छेउ भएको एउटा सानो खाल्टो पुर्न नसक्ने गैरजिम्मेवार नागरिक पनि यही काठमाडौँ महानगरपालिका नागरिकको रुपमा भएर आलिशान महलमा बस्ने गरेका छन् । कुरा गर्यो कुराकै दु:ख !
पहिलो सेल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सिसडोल पार गरेर मात्रै बञ्चरेडाँडा पुग्नुपर्ने भएकाले थप समस्या भएको सहरी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउछन् । साँघुरो ठाउँ तर लामो समयदेखि फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थान सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिएकाले उक्त फोहरको ढिस्कोलाई पार गरेर अहिले बञ्चरेडाँडामा गाडी जान सक्ने अवस्था छैन ।
सोका लागि पहिले सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले समन्वय गरेर सिसडोल पार गर्ने पुल निर्माणको काम गर्नुपर्छ, अन्यथा समस्या समाधान हुन कठिन हुने उनीहरु बताउछन् । बिगत २ हप्ता भन्दा अघिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर नियमित रूपमा उठ्न सकेको छैन ।
त्यसो त गत साउन ३२ देखि नै कामपाले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेर नगरवासीलाई एक हप्ता घर बाहिर फोहर ननिकाल्न आग्रह गरेको थियो । तर १४ दिन बितिसक्दा पनि उपत्यकाको फोहर अझसम्म उठ्न सकेको छैन । जसले गर्दा नदी किनार र सडक छेउछाउमा दुर्गन्ध फैलिन थालिसकेको छ ।
कामपा कर्मचारीहरु सहरी विकास मन्त्रालयले समयमा नै दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम सम्पन्न नगर्दा थप समस्या भएको बताउछन् । उनीहरुका अनुसार निर्माणाधीन बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनको काम शुरु नगरिएसम्म समस्या समाधान नहुने भएकोले सिसडोलमा पनि अब व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएको बताउछन् ।
डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारीका अनुसार यसमा सडक विभागले गर्नुपर्ने काम सकिएको छ । सिसडोलको फोहरको थुप्रो पन्छाएर सोही स्थानबाट बञ्चरेडाँडामा फोहरको गाडी लाने वा अर्को विकल्प खोज्ने काम कामपाको हो ।
वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४३३औँ हप्तामा काठमाडौँ महानगरपालिका-११ स्थित थापाथलीको शिवमन्दिर क्षेत्रमा सफाइका क्रममा यस्तो भेटिएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सञ्चालक सदस्य एवं अभियानकर्मी डा. माला खरेलले जानकारी दिइन् ।
करिब १५० जना अभियानकर्मीको सक्रियतामा भएको सफाइबाट जम्मा भएको फोहर नदी किनारमै थुपार्नुपरेको अभियानकर्मीले जनाएका छन् । डेढ महिनाअघिदेखि नै राजधानीको फोहर नउठ्दा सफाइ गरेर फोहर नदी किनारमै थुपार्न बाध्य हुनुपरेको हो । आजको सफाइमा पनि खोलबाट फोहर टिपेर किनारमा राखिएको हो । पानीले फेरि फोहर नदीमै लैजाने चिन्ता रहेको अभियानकर्मी खरेलले बताइन् ।
#निदायो काठमाडौँ महानग
#वाग्मती बन्यो डम्पिङ साइट